समानुपातिकको पूर्व परिणामः कुन दललार्इ कति सिट ? – Halkaro
समानुपातिकको पूर्व परिणामः कुन दललार्इ कति सिट ?
काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना करिब–करिब सकिएको छ । शनिबार रातिसम्ममा ९५ लाख ३ हजार ६ सय १८ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्लाही २ र ३ नम्बर क्षेत्रको गणना जारी छ ।
प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी भने लोकप्रिय मतमा तेस्रो स्थानमा छ । उसले १२ लाख ९५ हजार ९ सय ३ मत ल्याएको छ । समानुपातिक सिट जोड्दा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुनेछ । लोकप्रिय मतमा अन्तिम समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमलाई उछिनेको अाजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । समानुपातिकको गणना सुरु भएदेखि चौथो स्थानमा रहेको फोरम शनिबार राति यो समाचार तयार पारिरहँदा पाँचौं स्थानमा पुगेको छ । राजपाले फोरमलाई १ हजार २५ मतले जितेको छ । राजपाले ४ लाख ७० हजार ४ सय ८६ मत पाउँदा फोरमले ४ लाख ६९ हजार ४ सय ६१ मत ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिटले फोरमभन्दा राजपा अगाडि छ । राजपाले ११ र फोरमले १० सिट जितेका छन् ।
← समानुपातिकतर्फ एमालेको अग्रता कायमै
भूकम्पको तीन वर्षः अझै बनेनन् विद्यालय, कठ्यांग्रिँदै विद्यार्थी →